एप्पलले आईट्यून्स जडान सुधार गर्दछ। बहु आईडी प्रबन्ध गर्न सकिन्छ | आईफोन समाचार
एप्पलले बहु खाताहरू प्रबन्ध गर्ने क्षमतासहित आइट्यून्स जडान सुधार गर्दछ
एप्पल अपडेट भएको छ आईट्यून्स जडान एक राम्रो मुठ्ठी उपन्यास सहित, जसको बीचमा बहु खाताहरू प्रबन्ध गर्नुहोस्। साथै नयाँ प्यारालक्स निर्यात र दृश्य समावेश छ, जुन टिभीओएस आइकनहरूको लागि आवश्यक छ। अर्कोतर्फ, अब देखि विकासकर्ताहरू (अरू बीचमा) पनि उनीहरूको अनुप्रयोगहरूको तथ्या of्कहरूको अधिक नियन्त्रण गर्न सक्षम हुनेछ, जस्तै उनीहरूको बिक्री र चलनहरू। तल तपाईसँग समाचारहरूको विस्तृत सूची छ जुन आईट्यून्स जडानमा समावेश गरिएको छ।
1 नयाँ आईट्यून्स जडान सुविधाहरू
1.1 विशिष्ट अनुप्रयोग प्रयोगकर्ताको भूमिका
नयाँ आईट्यून्स जडान सुविधाहरू
प्रदायकहरू परिवर्तन गर्ने सम्भाव्यता.
टेस्टफ्लाइटमा अपडेटहरू: अब देखि, अनुप्रयोगहरू २,००० प्रयोगकर्ताहरू तिनीहरूको विकासमा बाह्य र २ and आन्तरिक परीक्षकहरू द्वारा परीक्षण गर्न सकिन्छ। तपाईं 2.000० दिनको लागि एकै समयमा १०० अनुप्रयोगहरू सम्म परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ, र तपाईं बाह्य परीक्षकहरूको लागि एक दिन applications अनुप्रयोगहरू अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। टिभीओएसका लागि टेस्टफ्लाइट सबैको लागि उपलब्ध गरिएको छ।
लंबनको पूर्वावलोकन र निर्यात (बीटा): TVOS आइकनलाई नयाँ एप्पल टिभीमा नयाँ लम्बाई प्रभावको लागि स्तरित छविहरू आवश्यक छ। तपाईले प्लग-इन Adobe Photoshop को लागी पूर्वावलोकन गर्न र एउटा स्तरित छवि निर्यात गर्न सक्नुहुनेछ।
नयाँ व्यावसायिक वर्ग: नयाँ व्यापार कोटी अब सबै क्षेत्रहरूमा उपलब्ध छ। नयाँ कोटीको साथ, यो अब आईओएस प्रयोगकर्ताहरूको लागि शपिंग अनुभव बृद्धि गर्ने अनुप्रयोगहरू फेला पार्न र मजा लिन अझ सजिलो छ।
एक एप्पल आईडीको साथ बहु प्रदायकहरूको प्रबन्ध गर्दै.
बिक्री र प्रचलनहरूमा अपडेट गर्नुहोस्: विशेष सामग्री र रिपोर्टको लागि बिक्री र प्रचलनहरूमा अब एप्पल टिभी सामेल छ, र ती रिपोर्टहरूमा उत्पाद प्रकार परिचयकर्ताहरू पनि अद्यावधिक गरिएका छन्। यी परिवर्तनहरूको बारेमा अधिक अब बिक्री र रुझान गाइडमा फेला पार्न सकिन्छ।
नयाँ व्यावसायिक वर्ग: नयाँ वाणिज्यिक कोटी अब एप्स स्टोर्समा विश्वभर उपलब्ध छ। नयाँ कोटीको साथ, यो अब प्रयोगकर्ताहरूलाई शपिंग अनुभव बृद्धि गर्ने अनुप्रयोगहरू फेला पार्न सजिलो भएको छ।
विशिष्ट अनुप्रयोग प्रयोगकर्ताको भूमिका
प्रयोगकर्ता भूमिका समावेश गरिएको छ र अब यो आईट्यून्स जडान अनुप्रयोगहरूमा टीमको पहुँच राम्रो व्यवस्थापन गर्न सम्भव छ:
अनुप्रयोग प्रबन्धक (अनुप्रयोग प्रबन्धक): समीक्षाको लागि अनुप्रयोगहरू अपलोड गर्न, उनीहरूको मूल्य र उपलब्धता परिवर्तन गर्न, र प्रयोगकर्ताहरू र परीक्षकहरूलाई उनीहरूले पहुँच गरेका समान अनुप्रयोगहरूमा पहुँच गर्न आमन्त्रित गर्दछ।
विकासकर्ताहरू- बाइनरीहरू अपलोड गर्न, टेस्टलाइट टेस्टहरू प्रबन्ध गर्न, र मेटाडाटा समीक्षा गर्न सक्षम हुनेछ।
मार्केटर्स- तिनीहरू मेटाडाटा सम्पादन गर्न, प्रोमो छविहरू अपलोड र प्रोमो कोड अनुरोध गर्न सक्षम हुनेछन्।
सेल्स: तिनीहरू बिक्री र प्रचलनहरूको साथ साथै अनुप्रयोगहरूको तथ्या statistics्कहरूमा पहुँच गर्न सक्नेछन् जुन तिनीहरूको पहुँच छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » एप्पलले बहु खाताहरू प्रबन्ध गर्ने क्षमतासहित आइट्यून्स जडान सुधार गर्दछ
हेलो के तपाइँ टेस्टलाइटको साथ बीटा अनुप्रयोग प्रयोग गर्न को लागी केहि निर्देशनहरू राख्न सक्नुहुन्छ
फोटो फ्ल्यासब्याक: तपाईको फोटोलाई अतीतबाट सम्झनको लागि एक रोचक अनुप्रयोग
रुन्ट्यास्टिक परिणामहरू, P90x तपाईको हातको हत्केलामा